Tag: mpamorona hevitra atiny » Martech Zone
Tag: mpamorona hevitra atiny
Fotoana famakiana: 2 minitra Lohateny, lohateny, lohateny, lohateny… izay tianao hiantsoana azy ireo, izy ireo no zava-dehibe indrindra amin'ny atiny rehetra atolotrao. Inona no zava-dehibe? Araka ity infografika Quicksprout ity, raha 80% ny olona mamaky lohateny, ny 20% amin'ny mpijery ihany no tena mikitika. Ny lohateny lohateny dia manakiana ny fanatsarana ny motera fikarohana ary ny lohateny lehibe dia ilaina amin'ny fampitana ny atiny amin'ny media sosialy. Fantatrao izao fa zava-dehibe ny lohateny, mety manontany tena ianao hoe inona